နို့တိုကျမိခငျတှေ သိထားသငျ့သော အာဟာရဆိုငျရာအခကျြမြား | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
မိခင်နို့တိုက်ကျွေးတယ်ဆိုတာ ကလေးကျန်းမာဖို့နဲ့ ကြီးထွားဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေကို ကလေးကို ပေးနေခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးအာဟာရအတွက် မိခင်နို့ချို တိုက်ကျွေးတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နို့တိုက်မိခင်က အစာဘယ်လောက်စားရမလဲ၊ ဘာတွေ ရှောင်ရမလဲ၊ မိခင် စားလိုက်တဲ့ အစားအစာက ကလေးအပေါ် ဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိလဲ စသည်ဖြင့် မေးခွန်းများစွာ ရှိကြပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အာဟာရဆိုင်ရာ အခြေခံ အချက်အလက်လေးတွေကို နားလည်ထားဖို့ လိုပါတယ်။
>> ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ အမေအတွက် ကယ်လိုရီတွေ ပိုပြီးလိုအပ်ပါသလား?
လိုအပ်ပါတယ်။ မိခင်ရဲ့စွမ်းအင်တွေကို ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့အတွက် တစ်နေ့ကို ၃၃၀-၄၀၀ ကယ်လိုရီခန့် ပိုစားပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီအပိုလိုအပ်တဲ့ ကယ်လိုရီအတွက်ဆိုရင် ဖြူအောင် အတင်းဖွတ်ထားတာ ပြုပြင်ထားတာမဟုတ်တဲ့ ပေါင်မုန့်နဲ့ မြေပဲ၊ ထောပတ်စားပွဲတင်ဇွန်း တစ်ဇွန်း၊ အလယ်အလတ်အရွယ် ငှက်ပျောသီး (သို့) ပန်းသီးတစ်လုံး၊ ဒိန်ချဉ် ၈ အောင်စခန့် စတာတွေကဲ့သို့သော အာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာတွေကို ရွေးချယ်စားသောက်ပေးပါ။
>> ကလေးနို့တိုက်နေတဲ့ မိခင်တွေက ဘာတွေစားသင့်သလဲ?
နို့ထွက်အားကောင်းဖို့အတွက် အထောက်အကူပြုစေတဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာတွေကို စားပေးရပါမယ်။ အဆီမပါတဲ့ အသား၊ ငါး၊ ဥ၊ နို့နှင့် နို့ထွက်ပစ္စည်းများ၊ ပဲ၊ ပြဒါးပါဝင်မှုနည်းသော ပင်လယ်စာများစတဲ့ အသားဓာတ် ကြွယ်ဝသော အစားအစာများ၊ ပြုပြင်ထားခြင်းမရှိသော ကောက်ပဲသီးနှံများ၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နှင့် သစ်သီးများစတာတွေကို ရွေးချယ် စားသောက်ပါ။ သစ်သီးနဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေ စားတဲ့အခါမှာ ပိုးသတ်ဆေးအန္တရာယ်ကို လျှော့ချနိုင်ဖို့အတွက် သေချာ ဆေးကြောပြီးမှ စားပါ။
ကလေးနို့တိုက်နေချိန်မှာ အစားအစာမျိုးစုံ စားပေးခြင်းဖြင့် နို့အရသာကို ပြောင်းလဲစေပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ကလေးကို အရသာအမျိုးမျိုး ထိတွေ့ပြီးဖြစ်စေတဲ့အတွက် ကလေး အစာစပြီးကျွေးတဲ့အခါမှာ လွယ်ကူစေပါတယ်။ ကလေးကော အမေပါ လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ သေချာရဖို့အတွက် ကလေးဖြည့်စွက်စာ စကျွေးတဲ့အချိန်အထိ ဆရာဝန်က ကိုယ်ဝန်ဆောင်အားဆေး ဆက်သောက်ဖို့ ညွှန်ကြားပါလိမ့်မယ်။
မိခငျနို့တိုကျကြှေးတယျဆိုတာ ကလေးကနျြးမာဖို့နဲ့ ကွီးထှားဖို့အတှကျ လိုအပျတဲ့ အာဟာရဓာတျတှကေို ကလေးကို ပေးနခွေငျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ကလေးအာဟာရအတှကျ မိခငျနို့ခြို တိုကျကြှေးတာနဲ့ ပတျသကျပွီး နို့တိုကျမိခငျက အစာဘယျလောကျစားရမလဲ၊ ဘာတှေ ရှောငျရမလဲ၊ မိခငျ စားလိုကျတဲ့ အစားအစာက ကလေးအပျေါ ဘယျလိုအကြိုးသကျရောကျမှုရှိလဲ စသညျဖွငျ့ မေးခှနျးမြားစှာ ရှိကွပါလိမျ့မယျ။ ဒီတော့ မိခငျနို့တိုကျကြှေးခွငျးနဲ့ ပတျသကျတဲ့ အာဟာရဆိုငျရာ အခွခေံ အခကျြအလကျလေးတှကေို နားလညျထားဖို့ လိုပါတယျ။
>> ကလေးနို့တိုကျနခြေိနျမှာ အမအေတှကျ ကယျလိုရီတှေ ပိုပွီးလိုအပျပါသလား?
လိုအပျပါတယျ။ မိခငျရဲ့စှမျးအငျတှကေို ထိနျးသိမျးထားနိုငျဖို့အတှကျ တဈနကေို့ ၃၃၀-၄၀၀ ကယျလိုရီခနျ့ ပိုစားပေးဖို့ လိုပါတယျ။ ဒီအပိုလိုအပျတဲ့ ကယျလိုရီအတှကျဆိုရငျ ဖွူအောငျ အတငျးဖှတျထားတာ ပွုပွငျထားတာမဟုတျတဲ့ ပေါငျမုနျ့နဲ့ မွပေဲ၊ ထောပတျစားပှဲတငျဇှနျး တဈဇှနျး၊ အလယျအလတျအရှယျ ငှကျပြောသီး (သို့) ပနျးသီးတဈလုံး၊ ဒိနျခဉျြ ၈ အောငျစခနျ့ စတာတှကေဲ့သို့သော အာဟာရဓာတျပွညျ့ဝတဲ့ အစားအစာတှကေို ရှေးခယျြစားသောကျပေးပါ။
>> ကလေးနို့တိုကျနတေဲ့ မိခငျတှကေ ဘာတှစေားသငျ့သလဲ?
နို့ထှကျအားကောငျးဖို့အတှကျ အထောကျအကူပွုစတေဲ့ ကနျြးမာရေးနဲ့ညီညှတျတဲ့ အစားအစာတှကေို စားပေးရပါမယျ။ အဆီမပါတဲ့ အသား၊ ငါး၊ ဥ၊ နို့နှငျ့ နို့ထှကျပစ်စညျးမြား၊ ပဲ၊ ပွဒါးပါဝငျမှုနညျးသော ပငျလယျစာမြားစတဲ့ အသားဓာတျ ကွှယျဝသော အစားအစာမြား၊ ပွုပွငျထားခွငျးမရှိသော ကောကျပဲသီးနှံမြား၊ ဟငျးသီးဟငျးရှကျနှငျ့ သဈသီးမြားစတာတှကေို ရှေးခယျြ စားသောကျပါ။ သဈသီးနဲ့ ဟငျးသီးဟငျးရှကျတှေ စားတဲ့အခါမှာ ပိုးသတျဆေးအန်တရာယျကို လြှော့ခနြိုငျဖို့အတှကျ သခြော ဆေးကွောပွီးမှ စားပါ။
ကလေးနို့တိုကျနခြေိနျမှာ အစားအစာမြိုးစုံ စားပေးခွငျးဖွငျ့ နို့အရသာကို ပွောငျးလဲစပေါတယျ။ ဒီအခါမှာ ကလေးကို အရသာအမြိုးမြိုး ထိတှပွေီ့းဖွဈစတေဲ့အတှကျ ကလေး အစာစပွီးကြှေးတဲ့အခါမှာ လှယျကူစပေါတယျ။ ကလေးကော အမပေါ လိုအပျတဲ့ အာဟာရဓာတျတှေ သခြောရဖို့အတှကျ ကလေးဖွညျ့စှကျစာ စကြှေးတဲ့အခြိနျအထိ ဆရာဝနျက ကိုယျဝနျဆောငျအားဆေး ဆကျသောကျဖို့ ညှနျကွားပါလိမျ့မယျ။